inflation Archives - The Source
Zim workers union wants 50pct salary raise after steep price increases
2 months ago by Economy
HARARE, December 19 (The Source) – The country’s biggest labour union, the Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) says salaries should be increased by at least 50 percent to mitigate against the rising cost of living.
Zimbabwe inflation rises to 2,94 pct
HARARE, December 15 (The Source) – Zimbabwe’s consumer price index increased by 0,73 percent to 2,94 percent in November, the national statistics agency reported on Friday.
HARARE, October 16 (The Source)- Zimbabwe’s annual inflation for September stood at 0.78 percent after gaining 0.64 percent on the August 2017 rate of 0.14 percent, the statistics agency reported on Monday.
Inflation flat at 0,14pct in August
HARARE, September 15 (The Source) – Zimbabwe’s year-on-year inflation remained flat at 0.14 percent in August, according to data released by the statistics agency on Friday.
Zimbabwe inflation falls to 0.31pct in June
HARARE, July 17 (The Source) – Zimbabwe’s inflation rate slowed to 0.31 percent year-on-year in June from 0.75 percent in May, the Zimbabwe National Statistics Agency said on Monday.
8 months ago by AlfonceZimstat, Inflation, Featured
HARARE, June 15 (The Source) – Zimbabwe’s annual inflation for the month of May gained 0.27 percentage points to 0.75 percent, the national statistics agency reported on Thursday. The month on month inflation rate in May 2017 was 0.03 percent shedding 0.02 percentage points on… Read More
HARARE, March 13 (The Source) – Zimbabwe’s year on year inflation rate for the month of March gained 0.15 percentage points to 0.21 percent, the statistics agency reported on Thursday The month on month inflation rate in March was 0.03 percent shedding 0.58 percentage points… Read More